Posted by Tranquillus | Nov 28, 2018 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Kadib maqaalkeenii ku saabsanaa sida loo soo bandhigo email raaligelin uu u yahay saaxiibHalkan waxaa ku qoran talooyin ku saabsan raaligelinta kormeeraha.
Raali gelinta kormeeraha
Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad ka raali geliso maamulahaaga sabab kasta ha noqotee: dhaqan xumo, dib u dhac shaqada ama shaqo si liidata loo fuliyay, dib u dhac soo noqnoqday, iwm.
Sida raaligelinta shaqalahaaga, emailka waa inuu ku jiraa oo keliya raali gelin rasmi ah, laakiin sidoo kale dareen ah inaad ogtahay inaad khalad tahay. Waa inaadan eedeyn madaxaaga oo aad qadhaadhid!
Waxaa intaa dheer, e-mailkani waa inay ku jiraan hubinta inaadan ku celin doonin habdhaqanka kuu horseeday in aad raali gelisid, sameysid si daacad ah intii suurtagal ah.
Halkan waxaa ku yaal shey e-mayl ah oo aad ku raalli geliso kormeerahaaga qaab habboon, tusaale ahaan marka laga hadlayo shaqo la soo daahay goor dambe:
Waxaan jeclaan lahaa farriintan gaaban ee ah in ay raaligelin ka bixiso daahitaankayga warbixintaydii, oo aan subaxdii ku soo bandhigay miiskaaga. Waxaa igu dhacay cimilada, mudnaantana aan si aan fiicneyn u abaabulay. Waxaan si daacadnimo ah uga xumahay shaqadayda xirfad la'aanta ee mashruucaan waxaanan ka warqabaa dhibaatooyinka ay tani ka dhalisay.
Waxaan rabaa in aan xoogga saaro in aan mar walba aad u dadaalayo shaqadayda. Farqiga noocan oo kale ah ma dhici doono mar kale.
Email template si aad raaligelin ugu noqoto kormeeraha Nofeembar 22nd, 2020Tranquillus
horeEmail template si aad raaligelin ugu noqoto saaxiib
socdaEmail template si aad uga jawaabto codsiga macluumaadka qof ka mid ah saaxiibka